IClermont Community Choir iyovinjwa kude – Bayede News
by nguDez Khumalo Posted on 11 February 2020 11 February 2020
IClermont Community Choir
Ngesikhathi kusungulwa iClermont Community Choir eminyakeni engama-25 eyedlule cishe abasunguli bayo babengaphuphi ukuthi izodlondlobala ibe esiyikhona manje. Leli khwaya eligxile kakhulu emculweni weclassic belethula ngokusemthethweni iDVD ngoSuku Lwenkululeko eThe Playhouse maphakathi nedolobha iTheku. Umcimbi ubuhanjelwe yizikhulu zikahulumeni okubalwa kuzo uNdunankulu Wesifundazwe saKwaZulu-Natal uMnu uWillies Mchunu kanye neMeya yase-eThekwini uNkk uZandile Gumede. Bebebaningi nabantu abebewuhambele umcimbi, iningi labo kungabathandi bomculo weclassic.
Ngaphandle kokuwola cishe yonke imiklomelo ebekelwe labo abakulo mkhakha womculo osekucacile ngaleli khwaya eliholwa yinsizwa esencane uWiseman Mkhize wukuthi alenelisekile ngokuzithuthukisa lona nje kuphela. Abaphathi balo bazimisele ukusebenza namaciko akweminye iminxa yomculo ukuze kuthokoze wonke umuntu. Ongumholi walo uMkhize uthe: “Sizimisele ukusihamba sonke isifundazwe kusuka ezansi nogu siye siyofika enyakatho yesifundazwe sivukuza silolonga amakhono kubaculi bakulezi zindawo. Yikho sizokwethula le DVD ukuze abaphethe kuhulumeni ezingeni lasekhaya nelesifundazwe bangezwa ngendaba kodwa bazibonele umsebenzi esiwenzayo,” kuphetha uMkhize.
Ngalena kokulolongeka kwamazwi ekhwaya yonke nabacula phambili kunokuhleleka okukhulu kwezimfijoli okwenza ukuthi leli khwaya likulungele ukugibela esiteji sanoma yiliphi izwe elikhona emhlabeni. Encoma umsebenzi osuwenziwe uNdunankulu uWillies Mchunu uthe, “Esesikulindele ngabomvu yiGrammy Award. Umsebenzi walaba baculi usezingeni elilingana ncamashi nalelo lamaqembu omculo aseke azuza le ndondo ehlonishwa umhlaba wonke okuyiLadysmith Black Mambazo neSoweto Gospel Choir.”
OkaMacingwane enkulumweni yakhe ebidle ngokuvuthwa nokucoliseka kwamagama utuse igalelo lamaciko ngesikhathi sengcindezelo eNingizimu Afrika wakhuthaza ukwesekelwa kweClermont Community Choir ukuze iphupho labasunguli bayo lingashabalali.
IMeya yase-Ethekwini uNkk uZandile Gumede uphawule ngebanga elide asebelihambe naleli khwaya nomnikelo eseliwenzile emphakathini waseNingizimu Afrika. Kweminye imisebenzi eseliyenzile wukuqhuba izifundo zomculo esifundazweni iLimpopo nokuhambela izwe laseFrance likhangisa ngomculo ohlanganisa nowendabuko kwaZulu-Natal.
Umcimbi wokwethulwa emphakathini kweDVD uqalwe ngokusikwa kweribhini okwenziwe ngokubambisana yiMeya, uNdunankulu noMphathiswa Womnyango Wezenhlalakahle uNkk uWeziwe Thusi. Umcimbi unandiswe wubukhona bukasomahlaya uSiyanda Maphumulo, abaculi beGospel uDumi Mkokstad noMnqobi Nxumalo weJoyous Celebration, uNozuko Teku neGrandi Trenoris abacula iClassical Opera. Ezingomeni ikhwaya elidlise ngazo kunethi ‘uCevuzile’ ehambisana nesigqi nomdlikizo osanganise izihlwele. Engomeni i‘The Holy City’ ikhwaya belidlisa ngokuhlangana nokucoliseka kwamazwi, ukukhombisa ukuvuthwa kwamalead vocalists nokukwazi ukucula lifike emanothini aphezulu.
Umcimbi uphele sekuya phakathi kwamabili ulokhu uqale ngehora lesishiyagalombili kungubumnandi bodwa.